संक्रमणबाट बच्न विज्ञहरुले सुझाए चार 'सी' को सूत्र - Khabarshala संक्रमणबाट बच्न विज्ञहरुले सुझाए चार 'सी' को सूत्र - Khabarshala
संक्रमणबाट बच्न विज्ञहरुले सुझाए चार ‘सी’ को सूत्र
बन्दाबन्दीको समयमा मानिसहरु अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्किने, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु बाहेकका पसल बन्द रहने जस्ता सावधानी र सजगताका नियम लागू भइरहेको थियो। यसैबीच, सरकारले विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दै जाने योजना गरे अनुसार बिहीबारदेखि निजी सवारीसाधन तथा पसलहरु खुलाउने, ब्याङ्क र कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ।
यसले मानिसको आवागमन बढ्ने भएकाले आगामी दिन निकै अप्ठेरा भएर आउनेछन्। किनकि, नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण दर बढिरहेकै वेला साढे दुई महीनादेखिको बन्दाबन्दी खुकुलो पारिएको छ।
यो स्थितिमा नियमित दिनचर्यामा फर्कंदा हामीले कोरोना महामारीपछि बदलिएको जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिंदै विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र वैज्ञानिकहरुले दिएका सुझावको पालना गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक छ, जसले गर्दा जीवन सहज होस्।
विज्ञहरुका अनुसार, कोरोना संक्रमणबाट आफू बच्न र समुदायलाई पनि सुरक्षित पार्न चार वटा ‘सी’ को सूत्र प्रभावकारी हुन्छ। ती हुन्, कन्ट्याक्ट, कन्फाइनमेन्ट, क्राउड र च्वाइस।
मानिसहरु बिस्तारै नियमित काममा फर्कन थालेका छन्। कार्यस्थलमा हुने जमघटका बीच अब आपसमा व्यक्तिगत दूरी कायम राखेर काम गर्नुपर्नेछ। त्योसँगै हाम्रो दैनिकीको हिस्सा बनिसकेको मास्क लगाउने र पटकपटक हात धुने काम त छुटाउने कुरै भएन।
अबका दिनमा सकेसम्म कम मानिसहरुसँगको सम्पर्क र भेटघाट सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। स्कटल्यान्डको यूनिभर्सिटी अफ सेन्ट एन्ड्रयुज स्कूल अफ मेडिसिनमा भाइरोलोजी एन्ड इन्फेक्शियस डिजिजका विज्ञ डा. मुगे सेविक ६ फिटको दूरीमा दुई व्यक्तिबीच १५ मिनेटको कुराकानीलाई ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ मान्छन्। जति नजिक गएर लामो समय कुराकानी गरिन्छ, संक्रमण सर्ने जोखिम उति नै बढी हुन्छ। यसैले कसैको नजिक गएर कम समय कुरा गर्ने र लामो समय कुरा गर्नुपर्ने भयो भने मास्क अनिवार्य लगाउने सजगता आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक स्थानमा जाँदा सुरक्षाको उपाय अपनाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्नेछ। कोरोनाभाइरस अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सर्ने पुष्टि भएको छ। तर, विज्ञहरु हामीले बारम्बार छोइरहने टेबल, बत्तीको स्वीच, फोन, ढोकाको ह्यान्डल आदि वस्तु र बाह्य सतहको लगातार सरसफाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
कन्फाइनमेन्ट (बन्दी जस्तो अवस्था)
बन्द ठाउँमा गरिने गतिविधि भाइरस फैलाउन सहयोगी हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यसैले झ्याल-ढोका खुला राखेर हावा खेल्ने ठाउँमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ।
केही विज्ञहरुले हावाको आवागमन नहुने बन्द अवस्थामा सञ्चालन हुने अफिस, इन्डोर रेस्टुरेन्टमा सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
डा. सेविकका अनुसार, जहाँ हावा खेल्दैन, त्यहाँ भाइरसको अंश लामो समयसम्म रहन्छ। त्यसले सतह पनि बढी दूषित हुने भएकाले श्वासप्रश्वासबाट संक्रमणको जोखिम बढ्छ। यस विपरीत हावा खेल्ने ठाउँ र झ्याल नजिकै बस्दा भाइरस संक्रमणको संभावना कम हुन्छ।
अमेरिकामा खुलिरहेका व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन हुने ठाउँको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले एउटा गाइडलाइन्स जारी गरेको छ। जसमा भेन्टिलेसन दुरुस्त अवस्थामा राख्न भनिएको छ।
खुला या बन्द जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि ठूलो समूहमा जोखिम बढी हुन्छ। बढी मानिस भएको ठाउँमा बढी सम्पर्क हुन्छ, अर्थात् संक्रमण हुने संभावना पनि ज्यादा हुन्छ। यूनिभर्सिटी अफ टेक्सस हेल्थ साइन्स सेन्टरमा इन्फेक्शियस डिजिजका विज्ञ डा. बार्बरा टेलर कुनै पनि ठाउँमा मानिसहरुको संख्याले ठूलो महत्व राख्ने बताउँछिन्। बढी मानिस भएको ठाउँमा आपसमा ६ फिटको दूरीमा रहने गरी माहौल बनाउन सकिन्छ। तर, जहाँ ५ सयको हाराहारीमा मानिस जम्मा हुन्छन्, त्यो ठाउँ ३० जना भेला भएको ठाउँको तुलनामा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ।
हरेक व्यक्तिले आफ्नो लागि कतिसम्म जोखिम सहज र सुरक्षित हुन्छ भनेर आफैंले फैसला लिनुपर्नेछ। यस्तो जोखिम छनोट गर्दा त्यसका जोखिमबारे प्रष्ट भएर त्यसै अनुसार सुरक्षामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
बढी जोखिममा रहेका वर्गले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यो वर्गमा खासगरी ६५ वर्षदेखि माथिका, प्रतिरोधी क्षमता कम भएका, श्वासप्रश्वास र मिर्गौलाका समस्यासँग जुधिरहेका व्यक्तिहरु पर्छन्। डा. टेलर युवा र बालबालिकाहरुले पनि आफ्नो आसपासका व्यक्तिहरुको सुरक्षामा विचार पुर्यालउनुपर्ने बताउँछिन्। – एजेन्सी